Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland oo Nairobi ku geeriyooday – news
Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland oo Nairobi ku geeriyooday
Geerida marxuumka ayaa sidoo kale waxaa ka tacsiyadeeyay siyaasiyiin iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Puntland.
Allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ku geeriyooday madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan eheladiisa oo warbaahinta la hadlay.
Marxuum Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa madaxweynihii 2-aad ee Puntland, isla markaana kaalin weyn kulahaa aasaaska maamul goboleedka Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay magaalada Nairobi, isagoona xalay saqdii dhexe halkaas ku geeriyooday.
Geerida marxuumka waxaa ka tacsiyadeeyay madaxweynaha maamulka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulkaas.
Marxuum Maxamed Cabdi Xaashi ayaa ahaa madaxweyne ku xigeenka 2-aad ee, ay yeelato Puntland 1998 ilaa dhammaadkii 2004, wuxuuna xilka madaxweynaha la wareegay 10 October 2004, isagoona haayay ilaa 8 january 2005.